Umfundi we-PhD Kwezobuchwepheshe Zobuciko, uNks Claire Dongo.
Umfundi owenza izifundo ze-PhD Kwezobuchwepheshe Zobuciko, uNks Claire Dongo, ungomunye wamaciko alindele ukuba sembukisweni oxhaswe yi-United Nations (i-UN) emunxeni ohlanganise imikhakha.
Ucwaningo lwakhe lugxile emfanekisweni ohlakazekile wobuciko beminyaka ye-1900 nezi-2000. Umsebenzi angenele ngawo ubizwa nge-The Many Faces of Green Labor.
Ngohlelo i-Green Enterprize Programme, i-International Labor Organization (i-ILO) ikhiphe isimemo kuwona wonke amaciko aseZimbabwe ukuthi athumele imisebenzi ekhombisa izindawo zokusebenza eziguqukayo ngokomnotho owonga imvelo nenezinselelo ngoshintsho olukhona olubanzi ngokubona kwawo.
Uma kubhekwa ukuthi lesi sihloko sibanzi futhi asikho lula, uDongo wanquma ukusebenzisa ucwaningo alubheka ukuthi lumele indlela abuka izinto ngayo. ‘Izinhlelo zekhompyutha ezizishaya samuntu (chatbots) ziyingxenye yomkhankaso wokonga imvelo kanti izinhlangano eziningi zizisebenzisa njengento ezingalekelela indlela imiyalezo yazo ezwakala ngayo. Indlela engangibuka ngayo izinto ngizibukela kude wukuthi uhlelo lwekhompyutha luthatha indawo yomuntu, inciphise amathuba omsebenzi,’ kuchaza yena.
Uma ubukelwa kude, umsebenzi wobuciko kaDongo ugcizelela lokhu, njengoba umfanekiso wohlelo lwekhompyutha ucishe uthinte umsebenzi womuntu ngopende oconsayo. Lokhu kumele indlela engeyinhle ayebuka ngayo lesi sihloko esibukela kude kodwa kwathi uma engena egxila ocwaningweni, indlela abuka izinto ngayo yashintsha, wabona ukuthi wayenziwa wukungaziqondi izinto. Uma umuntu ebhekisisa umsebenzi wakhe wobuciko, uyabona ukuthi wenziwe yizingcezu ezincane zezithombe eziveza izinto ezinhle.
UDongo ukholwa ukuthi izinhlelo zekhompyutha ezilingisa abantu zinciphisa intuthu yezimoto ngoba sebebancane abantu abahamba ngezimoto ukuya emsebenzini, okuneqhaza ekunciphiseni amandla kagesi njengoba ama-call centre asebenza ubusuku nemini esebenzisa ugesi omningi.
‘Izinhlelo zekhompyutha ezilingisa abantu aziqedi umsebenzi njengoba kwakucatshangwa, kepha zishintsha indlela okusizwa amakhasimende ngayo ngokudala imisebenzi yabantu abangochwepheshe bamakhompyutha ukuze zisebenze kangcono,’ kusho uDongo.
‘Zenza ngcono indawo yokusebenza ngokunciphisa amahora okusebenza nokwenza ukuthi kusebenzeke usekhaya, kuphucuke impilo yabantu. Lokhu kwenza umsebenzi uhambe kahle kuwona wonke umuntu. Indlela engayisebenzisa iphucula okuqukethwe njengoba ikwazi ukushintsha izithombe zihambisane namaqembu ehlukene, okufana nokulungisa, okuyinto edume kakhulu emkhankasweni wokonga imvelo,’ kusho yena.
Umsebenzi e-ILO eZimbabwe noMqondisi waseNamibia uvule umbukiso e-National Art Gallery e-Harare. Lowo mbukiso ubuhanjelwe okusetshenziswana nabo ohlelweni okubalwa kubona i-UN, i-British Council, i-Culture Fund, ne-Sweden Sverige. Umbukiso wamaqembu uzokhonjiswa umhlaba wonke ngokohlelo lokugubha iminyaka eyikhulu ye-ILO. Uzoba khona nasekomkhulu le-UN e-Geneva.